Kamshaan Saxaxa Unkaan kan mul'atuu, akkuuma ati haalataa saxaxaan hojeechaa wanta unkaa yammuu filatuudha.
Caasaa deetaa galmee DhangiiwwanX ammee ifteessa.
Haalata Saxatoon Bani
Unkaawwan Haalata Wixinee keessaa bana kanaafuu unkaan gulaalamuu danda'a.
Akka Saxaxa Halataati bani
Hammamtaa fi Qubannoo
Wanta filatame hagamtaa jijjiira, sochoosa, marsaa ykn duufessa.
Qubannoo fi Hamamtaa
Dirqaalee korkoddii gidduutti jijjiirruuf si dandeessisa.
Gara Fuulduratti fidi
Wanta filatame akka isaan wanta baqqeetti sochoosu danda'u gurmeessa.
Gurmuu filatame tokko tokkoo wantootaa keessatti addaan hira.
Gurmuu filatamee akka tokkoon tokkoo wantoota gulaaluu dandeessutti bana. Yoo gurmuun filatame gurmuu man'aaye qabate, ajaja kana gareewwan xixiqqoo irratti irra debi'uu ni dandeessa.
Gurmuu Keessaa Bahi
Tokkoon Tokkoo wantoota gurmuu keessaa yeroo dheeraaf akka hin gulaalle gurmuu dhiisa.
Tarsaa gara Ariitii
Wantawwan isa ati tuqaalee tarsaa qofaa gidduu ittiin siqsuu dandeessuu ifteessa.
Yammuu Sochii Qajeelcha
Title is: Kamshaa Saxaxa Unkaa